Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Magaalada NEOM - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Neom (qaabaysan NEOM; Carabi: نيوم Neom, Ku dhawaaqida Hejazi :) waa magaalo qorshaysan oo xuduudu ka gudubto oo ku taal Gobolka Tabuk ee woqooyi galbeed Sacuudi Carabiya. Waxaa loo qorsheeyay in lagu daro teknoolojiyada magaalooyinka casriga ah sidoo kale waxay u shaqaysaa sidii meel dalxiis. Goobtani waxay woqooyi ka xigtaa Badda Cas, bariga Masar oo ka gudubta marinka Tiran, iyo koonfurta Urdun Waxay ka koobnaan doontaa wadar ahaan 26,500 km2 (10,200 sq mi) waxayna ballaarin doontaa 460 km oo ku teedsan xeebta Badda Cas.
Sacuudi Carabiya waxay hiigsaneysaa inay dhameystirto qeybta koowaad ee Neom sanadka 2025. Mashruucan waxaa lagu qiyaasay inuu ku kacayo $ 500 bilyan. Bishii Janaayo 29, 2019, Sacuudi Carabiya waxay ku dhawaaqday inay aasaaseyso shirkad wadaag ah oo saamilay ah oo la yiraahdo Neom oo leh $ 500 bilyan. Ujeedada shirkaddan oo ay wada leeyihiin Milkiilaha Maalgashiga Dadweynaha, sanduuqa hantida qaran, ayaa ah horumarinta aagga dhaqaalaha ee Neom. Mashruuca waxaa loo qorsheeyay in lagu xoojiyo gabi ahaanba ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Nadhmi Al-Nasr waa maamulaha guud ee shirkadda Neom Joint-stock.
Mashruuca Neom wuxuu ku yaal Tabuk, Sacuudi Carabiya waqooyi-galbeed ee boqortooyada, waxaana lagu kordhiyay Gacanka Aqaba iyo 468 km oo xeeb leh xeebo iyo maraakiibta, iyo sidoo kale buuro dhererkeedu gaarayo ilaa 2,500 m, oo wadarta guud ay ku dhowdahay 26,500 sq. km
Gobolka loo xushay Neom wuxuu leeyahay cimilo yar oo fudud marka loo eego inta badan Sacuudi Carabiya
Hawlaha horumarinta ee mashruuca wejigiisa koowaad, Neom Bay, waxaa loo qorsheeyay inuu bilowdo rubuca koowaad ee 2019 lana dhamaystiro sanadka 2020. Horumarka waxaa ka mid ahaa in la dhiso garoonka diyaaradaha ee Sharma kaas oo ka shaqeyn doona duulimaadyo ganacsi oo joogto ah oo u dhexeeya Riyadh iyo Neom. Qorshaha horumarka Neom Bay wuxuu kaloo ku lug leeyahay dhismaha aaggii ugu horreeyay ee la dego ee Neom oo qayb ka ah wajiga 1.
Bishii Juun 2019, waxaa lagu dhawaaqay in garoonka diyaaradaha ee NEOM Bay uu bilaabi doono inuu helo duulimaadyo ganacsi ka dib markii wejiga koowaad ee garoonka la dhammaystiray dhererka dhabaha diyaaradaha ee 3,757 mitir. Gegada diyaaradaha ee la qorsheeyay in laga dhigo Neom Bay waxaa iska diiwaan geliyay Ururka Cirka ee Caalamiga (IATA) oo wata lambarka 'NUM'.
gudaha Tabuk / NEOM
eHalal Safarka Mart > Safarka Islaamka ee Sacuudiga > Tilmaamaha Safarka Muslimiinta ee Magaalada NEOM